အရေးကြီးသောစိန်များ - ပန်းရောင်နှင့်အပြာရောင်လ HIGH ရတနာအိပ်မက်
နိုဝင်ဘာလ 4, 2015
ဂျီနီဗာတွင်နာရီနှင့်ချီ။ ကွာဝေးသော“ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော” နှင့်“ အလွန်မြင့်မြတ်သော” ရတနာလေလံပွဲနှစ်ခုဖြစ်သည် ခမ်းနားရတနာမှာ ခရစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့တွင်ဂျနီဗာ, နှင့် ခမ်းနားရတနာနှင့် Noble ရတနာ, at Sotheby ရဲ့ နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင်ဂျီနီဗာ။
တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးစိန်နှစ်လုံးကိုပြသသည့်ဆောင်း ဦး ရာသီလေလံရာသီ၏အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ရပ်နှစ်ခု။ တှေ့ဆုံ အဆိုပါပန်းရောင် နှင့် The Blue Moon.
THE PINK - လေလံတင်ရောင်းချမှုတွင်အကြီးမားဆုံးကူရှပ်ပုံသဏ္vာန်ထင်ရှားသောပန်းရောင်စိန်။ အလေးချိန် - ၁၆.၀၈ ကာရက်။ ခန့်မှန်းချက် - US $ 16.08 - $ 22,453,759) ။
ပန်းရောင်ကို Christie's မှကြေငြာခဲ့သည် အကြီးဆုံးကူရှင်ပုံစံ Fancy Vivid ပန်းရောင်စိန် လေလံတင်ရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ကျောက်တုံးကြီးအဖြစ်တပ်ဆင်ထားသောကြီးမားသောကျောက်မျက်ရတနာတစ်လုံးပါ ၀ င်သည့်ကျောက်တန်းအဖြူရောင်စိန်နှစ်တန်းပါရှိသည်။ ကျောက်တုံးကြီးကိုဝန်းရံ။ မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်တတိယတန်းတွင်ရှိသောသေးငယ်သောပန်းရောင်စိန်များပါရှိသည်။
သဘာဝအရောင်အသွေးရှိတဲ့စိန်ပွင့်တွေထဲမှာပန်းရောင်အရောင်တောက်ပတဲ့သူတွေကကျောက်မျက်ရတနာတွေနှစ်သက်သူတွေထဲမှာအများဆုံးရှာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းရောင်စိန်အများစုသည်ခရမ်းရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အညိုရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်တို့ကဲ့သို့အရောင်အထူးပြုကိုပြသသော်လည်းခရစ်စတီ၏ပြပွဲတွင်ရောင်းချမည့် ၁၆.၀၈ ကာရက်စိန်သည်အလွန်ရှားပါးပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည့်အလယ်တန်းအရောင်တောက်ပမှုလုံးဝမရှိပါ။
ထို့အပြင် ၁၆.၀၈ ကာရက်ရှိ Fancy Vivid ပန်းရောင်စိန်အမျိုးအစားသည် IIa အမျိုးအစားစိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏအနည်းငယ်သာပါဝင်ပြီးကျောက်မျက်အားလုံး၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည်။ မျှတသောပြည့်နှက်ခြင်းနှင့်သေသပ်သောအရောင်ရင့်ခြင်းနှင့်ပန်းရောင်တောက်ပမှုတို့ပေါင်းစပ်ထားသောကျောက်တုံး၏အရောင်ဖြန့်ဖြူးမှုသည် Gemological Institute of America (GIA) မှရရှိသော 'Fancy Vivid' အရောင်အတွက် ၁၆.၀၈ ကာရက်ပန်းရောင်ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီစေသည်။ စိန်တစ်သိန်းလျှင် ၁၀၀ သာလျှင်နက်ရှိုင်းသောအရောင်တစ်မျိုးရှိပြီး 'Fancy' သည်၎င်း၏အကြွင်းမဲ့ဖြစ်မှုကိုအလေးအနက်ဖော်ပြသည်။
Christie's Hong Kong ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်နိုင်ငံတကာစိန်ဈေးကွက်၌သမိုင်းဝင်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် The Vivid ပန်းရောင်, ကရင့်တစ် ဦး လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၁၅၅,၃၃၂ နှင့် ၅.၀၀ ကာရက်ရှိကူရှင်ပုံသဏ္fာန်လှသောပန်းရောင်စိန်ပွင့်တစ်လုံးသည်ပန်းရောင်စိန်တိုင်းအတွက်စံနှုန်းသစ်တစ်ခုဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
The Vivid ပန်းရောင်စိန်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ အရည်အသွေးမြင့်ပန်းရောင်စိန်များ၏တစ်ကာရတ်စျေးနှုန်းများသည်ပုံမှန်တက်နေသည့်တောင်တက်တွင်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းလေလံစံချိန်သစ်များကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည့်အဓိကပန်းရောင်စိန်များအနက် Christie's သည်ရောင်းချခဲ့သည် Princie စိန်ဒေါ်လာ ၃၉.၃ သန်းဖြင့် ၃၄.၆၅ ကာရက်ရှိအကူအညီပုံသဏ္intာန်ပြင်းထန်သောပန်းရောင်စိန်၊
ပြီးပြည့်စုံသောပန်းရောင်ဒေါ်လာ ၂၃.၂ သန်းဖြင့် ၁၄.၂၃ ကာရက်ရှိစတုဂံပုံသဏ္ဌာန်ပြင်းထန်သောပန်းရောင်စိန်ပွင့်၊ နှင့်
Martian ပန်းရောင်ဟယ်ရီဝင်းစတန်၏ ၁၂.၀၄ ကာရက်ရှိစိန်တောက်ပသောပန်းရောင်ပြင်းထန်သောပန်းရောင်စိန်လက်စွပ်ကိုဒေါ်လာ ၁၇.၄ သန်းဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ Martian ပန်းရောင်
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက Christie's Hong Kong မှာ ၉.၀၇ ကာရက်ရှိဒေါ်လာ ၁၂.၆ သန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့စတုဂံပုံသဏ္ဌာန်ပြင်းတဲ့ပန်းရောင်စိန်လက်စွပ်
တစ် ဦး ကထိပ်တန်းအရောင်စိန်နှင့်စိန်လက်စွပ်။
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးနှင့်သမိုင်းဝင်ကျောက်မျက်ရတနာအချို့သည်ပန်းရောင်စိန်များဖြစ်သည်၊ ၄ င်းသည်အီရန်သရဖူရတနာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ၁၈၂ ကာရက်ရှိ Darya-i-Nur အပါအ ၀ င် ၂၀.၅၃ ကာရက်ရှိ 'Hortensia' သည်ယခင်ကပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ Crown Jewels ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးယနေ့ခေတ် Louvre တွင်လေးစားခံရရန်၊ အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးမှပိုင်ဆိုင်သော ၂၃.၆၀ ကာရက်ရှိဝီလျံဆင်။
ဝီလျံဆင် Brooch, 1953, Cartier Diamonds ။
အဆိုပါ Hortensia စိန်
အဆိုပါအပြာရောင်မွန်းစိန်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖန်ပြောင်သောအပြာရောင်စိန်များအနက်မှဤထူးခြားသောကျောက်တုံးသည် ၁၂.၀၃ ကာရတ်ရှိပြီး Gemological Institute of America (GIA) မှ Fancy Vivid Blue ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ ကူရှင်၏တောက်ပသောကျောက်တုံးသည်ထူးခြားသောရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိသည်။ $ 12.03-35 သန်းခန့်မှန်း။
အဆိုပါ အပြာရောင်မွန်းစိန် သဘာဝနှင့်လူသားများ၏တီထွင်ကြံဆမှုများအတူတကွလုပ်ဆောင်သောအခါဖန်တီးထားသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလှတရား၏သက်သေသာဓကတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိသည့်အပြာရောင်မွန်းကိုခရစ်စမတ်နေ့၌ကျင်းပခဲ့သည် “ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှားပါးဆုံးသောကျောက်မျက်များထဲမှတစ်ခု”, နှင့် GIA မှ၎င်း၏ Fancy Vivid အရောင်သည်မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားမှုရှိနိုင်သည်ကိုသင်ဤတွင်တွေ့နိုင်သည် ဗီဒီယို.
အမှန်မှာအပြာရောင်လွန်းစိန်၏အမည်သည်အလွန်ဖြစ်ခဲသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသော 'တစ်ချိန်ကအပြာရောင်လတွင်' ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ အမှန်မှာ၊ စိန်အပြာသည်စိန်တွင်းမှတူးဖော်ရရှိသောစိန်များ၏အနည်းငယ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုသာကိုယ်စားပြုသည်။
ထို့အပြင် Smithsonian Institution မှ National Gem နှင့် Mineral Collection မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အပြာရောင်လ၏အလွန်အမင်းရှားပါးခြင်းကြောင့်အလွန်စိတ်စွဲမှတ်သွားသည်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိကောင်တီ၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၏ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင်ပြသခြင်းမပြုမီသူတို့သည်စိန်ကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုအရ Blue Moon ၏အရောင်သည်စိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်မှန်ကန်ပြီးပြည့်နှက်နေသည်ဟုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်တီ၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်မှ Mineral and Gem Curator ဒေါက်တာ Elose Gaillou က“ ပြင်းထန်သောသမုဒ္ဒရာအပြာရောင်အရောင်” ကိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး ၄ င်း၏အရောင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အရွယ်အစားကြောင့်အပြာမွန်းကို“ ထိပ်ဆုံးတွင်ထိပ်ဆုံး၌တင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အပြာရောင်မွန်းစိန်Sotheby's မှတင်ပြခဲ့သည်မှာသူတို့တွင်ဖြစ်သည် အကြီးဆုံးလူသိများဖန်စီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းစိန်၂၀၁၅ နို ၀ င်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ဂျနီဗာရှိကျောက်မျက်ရတနာနှင့်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများလေလံတင်ရောင်းချခြင်း၏အဓိကကျသောနေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ 12.03 ကာရက် နှင့်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဖန်စီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအပြာရောင် - အပြာရောင်စိန်များအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအရောင်ကို - Gemological Institute of America (GIA) မှပြုလုပ်သည်။ ကူရှင်၏တောက်ပသောကျောက်တုံးသည်ကြေငြာထားသည့်အတိုင်းအထူးကောင်းမွန်သည် အတွင်းပိုင်းအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိ GIA ကပြုလုပ်သည်။ ဤအံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရှားပါးသည့်စိန်ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီးစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅-၅၅ သန်း။
အဆိုပါအပြာရောင်မွန်း - ပတ်ဝန်းကျင်
Blue Moon စိန်ပွင့်ရောင်းမည် Sotheby ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလက် ၀ တ်ရတနာဌာနဥက္ကB္ဌ David Bennett ကမှတ်ချက်ချသည် -
"တောင်အာဖရိကရှိ Cullinan သတ္တုတွင်းတွင် ၂၉.၆၂ ကာရက်ရှိအပြာရောင်ကြမ်းတမ်းသောစိန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၂.၀၃ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသော“ Blue Moon” စိန်သည်အရောင်နှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောကျောက်တုံးဖြစ်ပြီးထိပ်တန်းကူရှင်ပုံစံနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အပြာရောင်သည်ငါအတွက်စိန်အရောင်အားလုံး၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဆုံးနှင့်မှော်အတတ်ဖြစ်သည်။ ယခုအပြာရောင်လသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးကျောက်မျက်များကြားတွင်နေရာယူလိမ့်မည်။ ”
GIA Monograph အရ, Blue Moon စိန်၏အရောင်သည်
"အတွေ့အကြုံအရှိဆုံး Diamantaire သို့မဟုတ်အရောင်သဘောတရားပညာရှင်ပင်လျှင်မဖော်ပြနိုင်ပါ။ အချို့ကမူ၎င်းကိုသမုဒ္ဒရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
သဘာဝတရား၏အံ့ဖွယ်အမှုတော်များ၊ ဤထူးခြားသောစိန်နှစ်လုံးသည်သဘာဝစွမ်းအားများ၏စွမ်းအားနှင့်လူသားတို့အားပေးဆပ်နိုင်သည့်ကြီးမားသောရတနာများအကြောင်းပြောဆိုနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစကားမပြောနိုင်စေပါ။ CC
ပို့သည် ဂလော်ဒီယာ Carletti, အချိန်မှတဆင့်ရတနာ။ အားလုံးခရစ်၏နှင့် Sotheby ရဲ့ယဉ်ကျေးယဉ်ကျေး။
Tags:BlueDiamond • BlueMoon • ခရစ်စမတ် • ဂျီနီဗာ • GIA • ထူးအိမ်သင် • မင်္ဂလာပါ • ပန်းချီဆရာ • Sotheby ရဲ့ • ThePink
မှတ်ချက်2ခုအရေးကြီးသောစိန်များ - ပန်းရောင်နှင့်အပြာရောင်လ"
Pingback: လေလံရလဒ် - Christie ၏ခမ်းနားသောရတနာများ - ဂျနီဗာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် အချိန်မှတဆင့်ရတနာ
Pingback: လေလံပွဲရလဒ်များ - Sotheby ၏အံ့ဖွယ်ရတနာနှင့်ရတနာများ - ဂျနီဗာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် ၂၀၁၅ | အချိန်မှတဆင့်ရတနာ